Play 26 505
Kufaka 6 tinkhulumo kanye 11 yokwenza. Kufaka abanikeze asebenza nabo zanamuhla virtual 2D panel. Futhi kuhlanganisa inkambiso imisindo, Effective sikaphalafini effect, animations eziningi. Ungakhohlwa ukufunda Handbook.pdf.
I Lockheed Martin F-35 Lightning II umndeni ka-esihlalweni single, single-engine, owesihlanu isizukulwane multirole fighters ngaphansi ukuthuthukiswa ukwenza emhlabathini attack, kwesimo endaweni, futhi ohambweni air wezokuvikela khono stealth. F-35 has onobuhle ezintathu eziyinhloko; F-35A kuyinto ezivamile ukusuka kanye kokwehla okufana, F-35B is a short suka kanye mpo-kokwehla okufana, futhi F-35C kuyinto okufana othwala-based.
F-35 is bavela X-35, umkhiqizo ngehlelo Joint Strike Fighter (JSF). Ukuthuthukiswa JSF wenziwa ngokuyinhloko oxhaswe United States, ne-United Kingdom bese laba labanye bohulumende labakhona umlingani ukuhlinzeka mali eyengeziwe. Izizwe umlingani Kuphakathi amalungu NATO noma close US nemadlelandawonye. It is kokuba elaklanywa futhi lakhiwa ithimba Aerospace umkhakha abaholwa ngu Lockheed Martin. F-35 kwenziwe indiza yayo yokuqala kwi 15 December 2006.
IMelika uhlela ukuthenga ingqikithi 2,443 izindiza ukunikeza omningi airpower yayo Tactical for US Air Force, Marine Corps futhi Navy phezu emashumini eminyaka ezayo. The United Kingdom, Italy, eNetherlands, Australia, eCanada, Norway, Denmark, Turkey, u-Israyeli Japan bayingxenye yesimiso kokuthuthukiswa futhi ukuhlomisa amasevisi abo emoyeni F-35 (Wikipedia)
IRIS F-35B Scimitar FA.2 FSX & P3D Thwebula
Incazelo 7 905
Incazelo 32 531
Incazelo 19 866
Incazelo 31 052
Incazelo 4 369
Incazelo 33 713
Incazelo 7 488
Incazelo 31 859